Cloaking: यो राम्रो छ वा तपाईंको साइट को लागी नराम्रो? - उत्तर खाचाचुर्यन नतालिया, Semalt विज्ञ द्वारा
खाचाचुर्यन नतालिया, Semalt सामग्री रणनीतिकार, बताउँछ कि क्लोकिaking एक कालो टोपी एसईओ तकनीक को रूप मा परिभाषित गर्न सकिन्छ सर्च इन्जिन s को भ्रमित गरेर SEO रैंकिंग सुधार गर्न प्रयोग गरिएको। विधिमा खोज इञ्जिन क्रोलरहरू र वेबसाइट प्रयोगकर्ताहरूको लागि बिभिन्न किसिमको सामग्री प्रतिनिधित्व गर्दछ। प्राय: वेबसाइट मालिकहरू क्लोकिंग प्रयोग गर्न खोज परिणाम पृष्ठहरूमा तिनीहरूको अनुक्रमणिका सुधार गर्न प्रलोभनमा छन्।
क्लोकिंग गूगलको विशेषज्ञ दिशानिर्देशको उल्लंघन हो जुन दण्डलाई निम्त्याउन सक्छ। क्लोकिंगका केही उदाहरणहरू:
खोज ईन्जिनले अनुरोध गरेपछि एक कुञ्जी शब्द राख्दै। यस अवस्थामा, जब व्यक्ति पाठको लागि खोजी गर्दैछ उसले / उसले फेला पार्दैन, तर खोजी इन्जिनले यसलाई खोजी परिणामहरूमा सुधार भएको देख्दछ।
खोजी इन्जिनहरूमा मात्र HTML पाठको पृष्ठ देखाउँदै वेबसाइट प्रयोगकर्ताहरू मात्र छविहरू वा फ्ल्यास हेर्न सक्षम छन्।
क्लोकिंगले खोज इञ्जिन क्रोलरलाई भ्रमित गरेर काम गर्दछ ता कि यसले सोच्न सक्दछ कि पृष्ठ सामग्री यो भन्दा फरक छ। यसलाई सर्च ईन्जिन स्पाम वा खोज इञ्जिन विषाक्तता पनि भनिन्छ जुन कुनै खास वेबसाईटलाई उच्च स्तर निर्धारण गर्न खोज ईन्जिनलाई छल पुर्‍याउँदछ।
क्लोकिंग कसरी गरिन्छ?
अधिकांश व्यक्तिहरू क्लोकि ofका बारे सचेत छन्, तर उनीहरूले थाहा पाउँदैनन् कि यो कसरी राम्रोसँग गरिन्छ। तिनीहरूले बुझ्दैनन् कि कसरी वेबसाइट सामग्री खोज ईन्जिनको लागि प्रदर्शन गरिन्छ जुन प्रयोगकर्ताहरूले देखेका भन्दा फरक छ। इन्टरनेट क्षेत्रमा, प्रत्येक इन्टरनेट उपकरण आईपी ठेगानाबाट पहिचान हुन्छ। क्लोकिंग लागू गर्ने बेला, प्रयोगकर्ता-A नरम HTTP हेडर वा आईपी ठेगानामा आधारित सामग्री जुन सामग्रीको लागि अनुरोध गर्दैछ।
Cloking .htaccess लाई यसको उद्देश्य प्राप्त गर्न अनुमति दिँदछ। यसमा मोड्युराइ पुनःराइट भनेर चिनिन्छ जुन तपाइँको वेबसाइटमा क्लोकिंगको अनुप्रयोगमा मद्दत गर्दछ। यसले hhtaccess लाई खोज इन्जिनलाई भ्रमित गर्न मद्दत गर्दछ ताकि तपाइँको साइटले उच्च स्तर प्राप्त गर्न सक्दछ। मोड्युलले नियमित साइट आगन्तुकको आईपी ठेगाना खोजी ईन्जिनको भन्दा फरक गर्न सक्दछ। यदि यसले खोज इञ्जिनको आईपी ठेगाना फेला पार्छ, यसले सर्भर-साइड स्क्रिप्टलाई बिभिन्न वेब पृष्ठ संस्करण प्रदान गर्न दिन्छ। यदि आईपी ठेगाना क्रलरसँग सम्बन्धित छैन भने मोड पुन: लेखनलाई थाहा छ कि यो नियमित आगन्तुकको हो र यसले मानक वेब पृष्ठ देखाउँदछ।
Cloaking को विभिन्न प्रकारहरु
आईपी ठेगानामा आधारित क्लोकिंग - यो सर्भरको आईपी ठेगानामा आधारित अलग सामग्री संस्करणहरू प्रदर्शन गर्ने रणनीति हो। खोज इञ्जिनको आईपी ठेगानाले यसलाई बिभिन्न सामग्री प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ जबकि सबै अन्य आईपी ठेगानाहरूले फरक संस्करण प्राप्त गर्दछ।
प्रयोगकर्ता एजेंट क्लोकिंग - यस योजनाको साथ, सर्भर स्क्रिप्टले बिभिन्न पृष्ठहरू वा सामग्री एजेन्टको आधारमा सामग्री संस्करण डेलिभर गर्दछ।
HTTP-REFERER हेडर क्लोकिंग - विशेष वेबसाईट प्रयोग गर्ने बिभिन्न प्रयोगकर्ताहरु लाई HTTP REFERER हेडर मानको आधारमा वेबसाइट सामग्रीको बिभिन्न संस्करण प्रदान गरिन्छ।
जाभास्क्रिप्ट क्लोकिंग - यदि प्रयोगकर्ताहरूसँग जाभास्क्रिप्ट सक्षम गरिएको ब्राउजर छ भने, तिनीहरूले जाभा स्क्रिप्ट बन्द भएकाहरूबाट फरक संस्करण प्राप्त गर्नेछन्।
HTTP स्वीकार-भाषा हेडर क्लोकिंग - प्राप्त विभिन्न सामग्री संस्करणहरू वेब ब्राउजर भाषामा आधारित देखाइन्छ।
क्लोकिaking खतरनाक हुन सक्छ, र तपाईंले यसबाट अलग रहनु पर्छ। तपाईंको एसईओ रैंकिंगलाई सुधार गर्नुको सट्टा यसले तपाईंको व्यवसायलाई बिगार्न सक्छ यदि गुगलले याद गर्दछ कि तपाईं आफ्नो वेबसाइटमा ट्राफिक प्राप्त गर्न यो विधि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने।